Hlola i-Freeport, i-Grand Bahama - World Tourism Portal
Hlola i-Freeport, i-Grand Bahama
Iwebhusayithi esemthethweni yezokuvakasha yeFreeport
Bukela ividiyo mayelana neFreeport
Hlola iFreeport, idolobha elikuGrand Bahama. TIsimo sezulu sezulu singama-tropical ngokweqile futhi ngezikhathi ezithile amakhaza athinta indawo. Imvamisa, kepha isimo sezulu siyashisa futhi sinomswakama.
Amadola aseMelika amukelwa yonke indawo, futhi uma ukhokha ngokheshi, abathengisi abaningi ngeke bakukhokhise intela.
Kunezindlela eziningi zokuhamba ezitholakala eFreeport. Amatekisi atholakala kuzo zonke izindawo zokumisa izivakashi ezinkulu axoxa ngezinga eliphansi ngaphambi kohambo kuye ngokuthi uhambela kude kangakanani nenani labagibeli. Kunezinsizakalo eziningi zebhasi lokuvakasha namatekisi atholakalayo ukukunikeza uhambo lwedolobha laseFreeport futhi uqokomise izici zalo ezingase zibe nzima ngokwengeziwe kuwe. Ukuqasha Izimoto kungenye indlela ongabona ngayo ukuthi uFloeport unikela ini.
Yize iFreeport ingahle ingabi nayo inombolo efanayo yokuheha noma izivakashi njenge Nassau, kunemisebenzi eminingi kanye nezindawo eziningi ongazibhalela lezo ezizimisele ukuzihlola.
Izindawo ezifanele ukuvakashelwa:
ILucayan National Park - Ikhaya leGold Rock Rock, leli paki eliyisimanga kwakuyindawo yokuhlunga yePirates yaseCaribbean II kanye ne-III. Yize iningi lingaphansi komhlaba, leli paki libuye liqukethe enye yemigwaqo engenela emgedeni we-limestone, okungenye yezinhlelo ezinkulu zomhume emhlabeni ezingaphansi komhlaba.
IPort Lucaya - IPort Lucaya 'iyindawo' yezivakashi kulesi siqhingi futhi iyindawo yokudlela nezitolo eziningi. Imisebenzi ehlukahlukene ehlobene namanzi kanye nokuvakasha kungahlelwa ngokusebenzisa amadokodo abavakashi ePort Lucaya. Umculo obukhoma nokuzijabulisa kunikelwa futhi isonto nesonto, yize ngoLwesihlanu nangoMgqibelo ubusuku buvame ukuba nobusuku obuthandwa kakhulu (ikakhulukazi ngesikhathi sekhefu lasentwasahlobo).
I-Garden of the Groves - Owake waba yinsimu yangasese yedolobha eyasungulwa iWallace Groves, leli pharadesi elishisayo lisifanele isikhathi sakho.
IFry Fry (s) - Yize kunamaFrys amaningi endawo, aziwa kakhulu atholakala eTaino Beach futhi aphethwe njalo ngoLwesithathu kusihlwa / ebusuku.
Amabhishi - IFreeport yindawo enenqwaba yamabhishi amhlophe anesihlabathi esimangalisayo. Ezinye zezinto ezithandwa kakhulu zitholakala kwi-Our Lucaya, yize kulabo abazifunela eyabo indawo yangasese, kufanelekile uhambo lokuhlola abanye. Uma uqhubeka nokuhamba, ezinye izivakashi ezimbalwa uzozibona. Izindawo ezinconyiwe - i-Coral Beach, i-Williams Town Beach, i-Xanadu Beach, i-Taino Beach, iBarbarry Beach, i-Plane-crash Beach, i-Gold Rock Beach njll. Ngokujwayelekile, lonke uhlangothi oluseningizimu yeGrand Bahama Island luyibhishi, kanti uhlangothi olusenyakatho lubonakala kakhulu ngemithambeka. kanye nokubhukuda.
Emanzini - Amanzi ahlukahlukene olwandle ahlobanisa imisebenzi ihlinzeka ngombono ohluke ngokuphelele kunalokho ozovame ukuthole emhlabeni. Kulabo abathanda ukubhukuda, ukuhlwitha noma ukudonsa i-scuba, izihlahla zamakhorali kumele. Inani lezinhlanzi ezishisayo ozohlangana nalo liyamangaza. Futhi, izitolo ezahlukahlukene ze-dive zinikeza ezinye izimbotshana ezithokozisayo njengokuhlola izikebhe zemikhumbi, ukudonsela phansi oshaka noma amahlengethwa, kanye nokuhlola ngaphansi kwemigwaqo yamanzi emihumeni yelimestone.
Eminye imisebenzi ehlobene namanzi ifaka phakathi i-parasailing, jet skiing, izinkambo zokubuka izikebhe ezingaphansi kwengilazi, kanye neBooze Cruises.
Ukuhlala kwesiQhingi - Kulabo uhambo olungamangabazekayo uhambo olungahle luye edolobheni laseMaclean's noma eWest End kufanelekile ngenkathi. Uma uzimisele ukuyihlola ungamangala ukuthi yiziphi izindawo zokudlela ezincane, izitolo, amabhishi, nokuxhoma izindawo ongazithola. Futhi kuzokunikeza ukuqonda okungcono kweqiniso Bahamas, ngokungafani nalokho ozokuthola ePort Lucaya.
Amabhishi muhle kakhulu, futhi ungabhuka amabhayisekili amanzi noma izifundo zokudada lapho. Bhuka ngqo olwandle ngamanani aphansi.
Suka endaweni yezivakashi. Shayela ku-8 Mile Rock bese ubona elinye uhlangothi lwe Bahamas. Bheka umgwaqo odonsa amanzi bese uthola amachibi emvelo amadala aseNdiya. Kunamabhishi amahle afihliwe ngasese eLucayan National Park ngokuthatha umzuzu wokuhamba we-10 ngomgwaqo iMangrove. Thatha ubuhle bemvelo bock curled tailed.
Imakethe ebaluleke kuphela iMakethe yeLucayan: iningi lale ndawo linezitolo eziningi zomhlaba wonke ezinamanani aphezulu ngakho ungayi lapho. Imakethe alilikhulu kangako futhi uma uhamba ngokwanele. Uzothola indawo enezimfashini ezingatheni nezikhumbuzo ezenziwe ngezandla.
Endleleni eshaywayo, ungaya ezimakethe zasendaweni. Kukhona ama-delis anikeza izitsha eziyintandokazi zesiqhingi ezifana neConch (ebizwa ngokuthi i-conk) isaladi ne-mutton stew. Ukudla kushibhile kakhulu ku-rend ukwedlula ezindaweni zokuvakasha.
Ngemuva kweMakethe yeLucayan kukhona izindawo zokudlela eziningi zaphesheya.
Iya endaweni yendawo ubuze ngokukhethekile kosuku.
Ukuphila kwasebusuku kwaseFreeport kungenzeka kungabi kuhle njengoba Nassau ubusuku, kepha kusenokuningi ongakunikela.
Amahhotela ayabiza impela, futhi azikho izindawo zokuhlala ezishibhile; kungcono ukubhuka ihotela (i-4 noma i-5 izinkanyezi) ngaphambi kokuhamba noma ukuqasha ikhabethe kuhambo oluzolandela.
IFreeport inezindawo ezahlukahlukene zokulala ukuze ubambelele kunoma yini uhambo lwakho oludinga ngokukhethekile. Kusuka ekuchitheni okubandakanya konke emahhotela.
Phuma endaweni yabavakashi. Khuluma nabantu bendawo. Iya eLucayan National Park. Iya ku-Fruit and Vegetable Exchange bese udla isaladi yeTropical Conch. Hlola i-Freeport, i-Grand Bahama njengendawo.